प्रधानमन्त्रीको दावी : आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड-माधव पक्षको १० सिट पनि आउदैन!
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड-माधव पक्षको १० सिट पनि नआउने दाबी गरेका छन्।
बुधबार आफु निकट आदिबासी जनजाती महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधव कुमार नेपाल पक्षको १० सिट पनि नजित्ने दाबी गरेका हुन। उनले प्रचण्ड-माधव पक्ष सफलताको बाटो तर्फ नहिडेर भिरको बाटो हिडेको टिप्पणी पनि गरे। जनताले उक्त पक्षलाई कहिल्यै माफ नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । उनले बैशाख २७ गतेसम्म पुग्दा प्रचण्ड–माधव पक्ष बरफ पग्लिए जसरी पग्लिएर सकिने पनि बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक पार्टी आफुहरुको भएको बताए। त्यस्तै ओलीले आफूलाई ‘बेहाल’ हुनबाट जोगिन पार्टीको मूलधारमा फर्कन नेकपाको अर्को समूहलाई आग्रह गरेका छन्। कानूनीरुपमा एक भए पनि गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको हालको विवाद ‘नक्कली’ भएको र आधिकारिक पार्टीको नेतृत्व आफूले गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनले अहिले सडकमा विरोध गरिरहेकालाई ‘बरफ पग्लिएझैँ पखाल्ने’ बताए।
उनले ‘दसा’ लागेका केही पार्टी छाडेर गए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन, स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा कुनै अत्यावरोध नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले जनतालाई तर्साउने र अल्मलाउने तथा जातीय भड्काउको नारा उराल्ने जमाना गइसकेकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई जनताले चिनिसकेको पनि बताए। ओलीको प्रश्न थियो, ‘हामी विसं २०४७ मा पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य चयन गरेका हौँ। त्यो चिह्न मैले नै छानेको हो। कहिल्यै सूर्य चिह्नबाट निर्वाचन नलडेकालाई किन त्यो चिह्न चाहियो ?’
उनले आफूले भारतले मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउँछुभन्दा नक्कली राष्ट्रवाद भन्नेले विगतमा आफू सरकारमा हुँदा किन नयाँ नक्सा जारी गर्न नसकेको र चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धिसम्झौता गर्न नसकेको भनी प्रश्न पनि गरेका छन्। कार्यक्रममा नेकपामा सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन तोकिएकाले निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याई स्थिरता दिने बताए। उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेको अवसरवाद र प्रतिगामी प्रवृत्तिलाई निर्वाचनले किनारा लगाउने पनि बताए।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पूर्व सांसद जितवीर लामा र राजनीतिकर्मी कमानसिंह लामालाई नेकपामा प्रवेश गराएका थिए।
Tagsप्रचण्ड–माधव पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रतिगमविरुद्ध संघर्षमा जुनसुकै विकल्पको निम्ति तयार छौ : अध्यक्ष माधव नेपाल
तीनबुँदे सहमतिको व्याख्या स्पष्ट भएन : नेपाली काङ्ग्रेस
त्रिविमा जारी नेविसंघको रिले अनसनमा माधव नेपालको समर्थन
सभामुख सापकोटालगायत सांसदहरुले कोरोना खोप लगाउँदै
विप्लव नेकपा र सरकारबीच बालुवाटारमा वार्ता जारी
जनार्दन शर्माको प्रस्ताव : सांसदहरू स्वतन्त्र ढंगले छलफलमा जुटौं
सरकार र विप्लव नेकपाबीचको वार्ता सकियो
किन हटाइँदैछ आइपीओमा १० कित्ताको प्रावधान ?
सरकारी पक्षले भन्यो : विप्लव नेकपासँगको वार्ता सकारात्मक
कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश
सभामुख सापकोटा र प्रचण्डले लगाए कोरोना खोप